yi - Synonyms of yi | Antonyms of yi | Definition of yi | Example of yi | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for yi
Top 30 analogous words or synonyms for yi
ယူနန်ပြည်နယ် ယူနန်ပြည်နယ်သည် ဘီစီ ၂ရာစုမှစ၍ ဟန့်မင်းဆက် (Han Dynasty (206 BC-220 AD)) လက်အောက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၈ရာစုတွင် တိဘက်-မြန်မာ ဘာသာစကားကို ပြောဆိုကြသော နန်‌ကျောက်ဘုရင့်နိုင်ငံ (Kingdom of Nanzhao) ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်သော နန်ကျောက်၏ အထက်တန်းလွှာ လူတန်းစား အများစုက ယီဘာသာစကား (Yi language) ကို ပြောဆိုကြရာ ယီဘာသာစကားသည် ယူနန်ပြည်နယ်၏ အတွင်ကျယ်ဆုံးဘာသာစကားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၃ရာစုတွင် မွန်ဂို ယွမ်မင်းဆက်လက်ထက်တွင် နန်ကျောက်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ပြည့်လွန်နှစ်များအထိ စစ်ဘုရင်များ အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသကို ဂျပန်တို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအခါ ဟန့်လူမျိုး (တရုတ်လူမျိုး) များသည် ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများမှာ လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၃၄% ခန့်သာရှိသည်။ အဓိကတိုင်းရင်းသားများမှာ ယီလူမျိုး (Yi)၊ ပိုင်လူမျိုး (Bai)၊ ဟနီလူမျိုး (Hani)၊ ကျွမ်းလူမျိုး (Zhuang)၊ တိုင်လူမျိုး (Dai) နှင့် မြောင်လူမျိုး (Miao) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကျောက်တုံးဥယျာဉ် Each year on the 24th day of the sixth lunar month, many Yi people celebrate the Torch Festival (火把节 "Huǒbă Jié"), which features folk dances and wrestling competitions.
ယူနီကုဒ် ယူနီကုဒ် ၅.၁ တွင် ရည်ရွယ်ထားသော စာဘာသာများမှာ Avestan, Egyptian Hieroglyphics, Tai Tham, Tai Viet, Imperial Aramaic, Inscriptional Pahlavi, Inscriptional Parthian, Javanese, Kaithi, Lisu, Meetei Mayek, Nü Shu, Old South Arabian, Old Turkic, Samaritan နှင် Tangut ဖြစ်ကြသည်။ အခြား စာဘာသာများမှာ Yi, ရှေး Uyghur and Oracle Bone Script တို့ ဖြစ်ကြသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၅၆)မျိုးရှိသည်။ ဟန့်လူမျိုး(ခေါ်) တရုတ်လူမျိုး မှာ စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၉၁.၉%ရှိသည်။ အခြားသော တိုင်းရင်းသားများအနက် လူဦးရေများပြားသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှာ ကျွမ်းလူမျိုး(Zhuang - ၁၆သန်း), မန်ချူးလူမျိုး (Manchu - ၁၀သန်း)၊ ဟွေးလူမျိုး (Hui - ၉သန်း)၊ မြောင်လူမျိုး (Miao - ၈သန်း)၊ ဝေးဝူးအာရ်လူမျိုး (Uyghur - ၇သန်း)၊ ယီလူမျိုး (Yi - ၇သန်း)၊ ထူကျားလူမျိုး(Tujia - ၅.၇၅သန်း)၊ မွန်ဂိုလူမျိုး (Mongols - ၅သန်း)၊ တိဘက်လူမျိုး (Tibetans - ၅သန်း)၊ ပုယီးလူမျိုး (Buyei - ၃သန်း) နှင့် ကိုရီးယားလူမျိုး (Koreans -၂သန်း) တို့ဖြစ်သည်။
ကျောက်တုံးဥယျာဉ် According to legend, the forest is the birthplace of Ashima (阿诗玛),abeautiful girl of the Yi people. After falling in love she was forbidden to marry her chosen suitor and instead turned intoastone in the forest that still bears her name.